I-Izumuna "絆(Igumbi Labantu Ababini) Engenazithintelo kufutshane ne-IC BSTv - I-Airbnb
I-Izumuna "絆(Igumbi Labantu Ababini) Engenazithintelo kufutshane ne-IC BSTv
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguNaohiro
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uNaohiro iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Esona sikhululo sikufutshane yi-Takefu station, ekwiikhilomitha eziyi-8 ukusuka kwisikhululo. Ngemoto, ikwiikhilomitha eziyi-5 ukusuka kwi-Takefu Inter checkout.Ijikelezwe yimithi kwindawo yokuhlala ethe cwaka, ingathi likhaya leholide. Inendawo eyi-1 200 m2, indawo yokupaka esimahla, kwaye ifudumele kuyo yonke indawo, kwaye iyafikeleleka.Uthutho oluvela kwisikhululo saseTakeshi luyabhatalelwa.
Esona sikhululo sikufutshane yi-Takefu Sta. Ikude ngeekhilomitha eziyi-8 ukusuka kwindlu engasemva. Ukuba usebenzisa imoto, indlu engasemva ikwikhilomitha eziyi-5 ukusuka kwi-Takefu IC. Yindawo yokuhlala ethe cwaka ejikelezwe yimithi, unokuziva ukwindlu enendawo yokuphola.
Indawo yayo yi-1 200 m2 kunye nendawo yokupaka imoto. Iphefumlelwe ngomoya ngokupheleleyo yaye ayinazithintelo.
Sinikezela ngenkonzo yokukhetha evela kwi-Takefu Sta. ngexabiso elithile.
Igumbi lentshona kumgangatho wesibini ligumbi elinebhedi enye nebhedi elala abantu ababini enye. Umgangatho wokuqala we-2 uyafikeleleka ngezitepsi kunye nelifti.
Ikhitshi lixhotyiswe ngerayisi yokupheka, i-toaster, i-microwave, i-IH heater yokupheka, kunye ne-blender, kwaye ungasebenzisa i-barista kwigumbi lokutyela.
Igumbi leNtshona, igumbi elineebhedi ezimbini, likumgangatho wesibini.
Ungaphumla ebhedini. Ilifti ilungisiwe.
Umpheki werayisi, i-toaster, i-microwave, i-IH cookater, i-mixer zixhonywe ekhitshini, umatshini wokwenza ikofu ozenzekelayo ukwigumbi lokutyela.
I-Echizen Washi, i-Echizen Katana, i-Echizen Tsubaki, i-Echizen Lacquerware, kunye ne-Echizen-yaki zezona ndawo zintlanu zobugcisa bakudala kule ngingqi, kwaye banikezela ngemenyu yezinto onokuzonwabela.
I-Aoi-ji ineeklasi zokubhala, iiklasi ze-yoga, kunye namava omsebenzi wasekuseni.I-Otaki Temple ekufutshane, indawo ebalulekileyo yenkcubeko,
Kukho ne-izakaya kunye nevenkile yokutyela ekhethekileyo ye- "Echizen Soba", kwaye ukuba uyazolula, unokutyelela i-Old Imabari Kaido, i-Eihei-ji Temple, indawo enembali ye-Ichiyagaya Asakura Ruins, kunye ne-Nishiyama Park.
Le ndawo yindawo yezinto zobugcisa ezinkulu ezintlanu ezifana ne-Echizen-washi (iphepha), imela ye-Echizen, i-Echizen-tansu (ibhokisi), i-Echizen lacquerware, i-Echizen potter. Silungiselela imenyu yezinto ezinokonwatyelwa ezininzi.
Ukuba uyafuna, ungazama i-calligraphy ne-yoga kwi-Shokushouji-temple uze uhlaziye i-sutra.
I-Otaki Temple, indawo ebalulekileyo yenkcubeko, ngokuqinisekileyo ufanele uyibone. Unokonwabela i-tavern uze uzame ukutya i-Echizen-soba ekhethekileyo, i-noodle yase-Japan.
Imajho old highway, Eiheiji-temple, Asakura-historic site and Nishiyama park are not away from here. Singakukhokela size sicacise iindawo kwiwebhsayithi.
Umbuki zindwendwe ngu- Naohiro
Ndikhetha ukudibana kwikhaya lombuki zindwendwe.
Isidlo sakusasa nesangokuhlwa nazo zinokulungiselelwa ukuba ziyafuna.
Sinokulungiselela iTV kwigumbi lokuhlala, i-karaoke, indawo yokoja egadini, namanye amatikiti kunye neesofa.
Sifuna ukwandisa ukutshintshiselana neendwendwe.
Siphinda sinikezele ngokutya xa sicelile. Unokonwabela iTV ne-karaoke kwigumbi lokuhlala nakwindawo yokoja egadini. Singaligcina itikiti size silungiselele ukuhanjiswa kwekhaya.
Sinokulungiselela iTV kwigumbi lokuhlala, i-karaoke…
Inombolo yomthetho: M180002323